မြန်မာ့မှတ်တမ်း | Sanchaung Journal | Page 3
Category Archives: မြန်မာ့မှတ်တမ်း
မုန်တိုင်းသတင်းနောက်ဆက်တွဲ 10 May
May 11, 2008 freebird	Leaveacomment
Google starts online donation
Internet major Google has initiated an online donation campaign for the cyclone victims in Myanmar and has committed to provide up to $one million financial assistance for relief works.
Google, which would donate up to one million dollars for the relief works in Myanmar, has called upon users to join efforts to assist the cyclone victims.
The search engine has teamed with United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) and Direct Relief International, an NGO which provides medical assistance to people affected by poverty, disaster and civil unrest.
“Your donation will help survivors and other disaster victims rebuild their communities and their lives. In addition, when you donate on this page, Google donates too. We’ll donate up to one million dollars to help organisations provide relief,” saidamessage posted on the webpage (www.Google.Com/myanmarcyclone).
မုန်တိုင်းသတင်းနောက်ဆက်တွဲ9May
May 9, 2008 freebird	Leaveacomment
Burma’s ruling military junta has seized the only two UN aid shipments to make it into the devastated country, which would have fed 95,000 people.
The UN has now halted aid flights until it can get guarantees that the food will reach survivors of Cyclone Nargis, which hit at the weekend.
Paul Risley, spokesman for the World Food Programme (WFP), said that all “the food aid and equipment that we managed to get in has been confiscated.” leaving the organisation with “no choice” but to stop flights.
The two shipments, which contained 38 tonnes of high-energy biscuits, were enough to feed 95,000 people –atiny fraction of the estimated 1.5 million destitute survivors of the cyclone.
“It should be on trucks headed to the victims. You’ve seen the conditions they are in. That food is now sitting onatarmac doing no good,” WFP regional director Tony Banbury said.
But the figure could rise to halfamillion through disease and hunger if the nation’s hardline army rulers continued to block aid to the devastated Irrawaddy Delta.
John Holmes, the United Nation’s humanitarian chief, said that the situation was “increasingly desperate” and that there wasa“real danger that an even worse tragedy may unfold if we cannot get the aid that’s desperately needed in quickly”.
Officials have been growing increasingly frustrated at the junta’s refusal to grant visas to specialist relief workers.
“Frustrations are growing about access,” Mr Holmes said, adding that there had been little progress in negotiations with the junta.
The survivors of the cyclone, which struck last Saturday killing an estimated 100,000 people, have now endured almostaweek without shelter or clean drinking water.
In the Irrawaddy delta, which bore the brunt of the storm, there is little evidence of the military regime dealing with the crisis itself.
In seven hours of driving on one of the region’s principal roads – in factanarrow track – yesterday, the Telegraph saw around two dozen army trucks.
If they were loaded with urgently needed supplies the goods were not visible above the level of the tailgate. Those soldiers that could be seen were mostly idle by the roadside, or hacking away redundantly at fallen trees.
UN officials in the country initially felt that gentle diplomacy was the best way to persuade the generals to let aid – and especially aid workers – into the country.
Now patience is running out. Most areas still have not seen significant assistance from either the regime or the frustrated international community. The junta has set up three command centres in the delta to deal with the crisis, one of them in the devastated town of Labutta.
However, residents claimed that senior officers were withdrawing from the town for fear of an epidemic.
နိုင်ငံတကာမှလွှင့်တင်ထားသော သတင်းများကို မှတ်တမ်းအနေနှင့်သာ စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Time running out for Myanmar cyclone survivors: UN
The top UN official in the Asia Pacific region warned on Friday that time was running out to get crucial supplies to cyclone survivors in Myanmar, and said that without aid more people would soon die.
Noeleen Heyzer, Under-Secretary General of the UN for the Asia Pacific, urged Myanmar’s military rulers to issue visas to aid workers, which have so far mostly been withheld by the reclusive regime.
“The situation is getting critical and there is onlyasmall window of opportunity if we are to avert the spread of diseases that could multiply the already tragic number of casualties,” Heyzer said inastatement.
She “urged again the Myanmar authorities to issue visas expeditiously, and if possible, exempt all visa requirements for all UN aid workers, so that aid can reach the people as quickly as possible.”
Humanitarian groups have warned ofasecond wave of deaths if food, clean water and medical supplies are not immediately shipped to the survivors.
Myanmar said in state press on Friday that it was “not ready” for foreign search and rescue teams after the deadly cyclone, announcing that some aid workers had been deported.
နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီများကိုကျေနပ်အားရစွာလက်ခံပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်သူများကိုမှု လက်မခံနိုင်ပါဟူ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ပြောကြားမှုကို UN မှ လွန်စွာ စိတ်ပျက်နေပါသည်။
UN ၏ အကူအညီလာခံသော ကာလတတလျှောက်တွင် ယခုကဲ့သို့ကျွမ်းကျင်သူများကို နှင်ထုတ်ခြင်းသည် တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးကြောင်းUN မှပြောကြားပါသည်။
YANGON, Myanmar — The United Nations blasted Myanmar’s military junta Friday, saying its refusal to let in foreign aid workers was “unprecedented” in the history of humanitarian work, even as survivors ofadevastating cyclone waited for food, shelter and medicine.
Myanmar’s junta said Friday it was grateful to the international community for its assistance, which has included 11 chartered planes loaded with aid supplies. But the best way to help was just to send in material rather than personnel, the junta said inastatement.
It said one relief flight was sent back after landing in Yangon Thursday because it carriedasearch and rescue team and media who had not received permission to enter the country. It did not give details, but said the plane had flown in from Qatar, which apparently referred toaU.N. flight.
Paul Risley,aspokesman for the U.N. World Food Program, said the organization has submitted 10 visa applications around the world, including six in Bangkok, Thailand, but that none has been approved.
“Believe me the government will not allow outsiders to go into the devastated area. The government only cares about its own stability. They don’t care about the plight of the people,” said Yangon food shop owner Joseph Kyaw, one of many residents angry at the regime for doing little to help them recover from the storm’s destruction.
It is not clear how much of the aid is reach the Irrawaddy delta where entire villages have been submerged with bodies floating in salty water and children ripped from their parents arms.
The U.N. estimates more than 1 million people are homeless.
မုန်တိုင်းသတင်းနောက်ဆက်တွဲ 8 May
May 8, 2008 freebird	Leaveacomment
“The information that we’re receiving indicates that there may well be over 100,000 deaths,” Shari Villarosa, the chargé d’affaires of the U.S. embassy in Burma, told reporters durtingaconference call from Rangoon.
She said the 100,000 figure was not confirmed, but was based on estimates by an international non-governmental organization, which she did not identify.
Burma’s state radio and television reportedadeath toll of 22,980 with 42,119 missing and 1,383 injured.
Time has becomeacritical issue in the crisis. There isadesperate need for food and clean water and the concern now is that diseases could spread quickly in the hot, humid conditions.
Thailand’s government was allowed to bring inaplaneload of food, water and medicine on Tuesday. Yesterday, two planeloads of supplies from India and one from China arrived in Rangoon, carrying tents, food and blankets. Two Indian naval ships loaded with supplies are also on their way.
Only the flight has been cleared to land; aid workers experienced in distributing the supplies still have not received visas to enter the country.
Burma’s isolationist government is blocking United Nations efforts to airlift urgently needed food aid to survivors of the cyclone which may have killed more than 100,000 people.
Paul Risley,aspokesman for the UN World Food Programme in Bangkok, said three flights were waiting to leave Dubai, Bangladesh and Thailand with about 50 tons (45 tonnes) of high-energy biscuits. A fourth shipment aboardascheduled Thai Airways cargo flight was likely to carry some biscuits later.
မုန်တိုင်းသတင်းနောက်ဆက်တွဲ7May
May 6, 2008 freebird	Leaveacomment
နိုင်ငံတကာမှလွှင့်တင်ထားသော သတင်းများကို မှတ်တမ်းအနေနှင့်သာ စုစည်း ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
photos are –
More than 22,000 people were killed in Burma’s devastating cyclone and 41,000 are still missing four days after the storm slammed into the country’s southern coast, the government said today.
In the government’s first news conference since tropical cyclone Nargis barrelled into the Irrawaddy region Saturday, it said that most of the delta town of Bogalay had been washed away.
“Ninety-five per cent of the houses in Bogalay were destroyed,” Social Welfare Minister Maung Maung Swe told reporters. “Many people were killed ina3.5-metre tidal wave.”
“They saw the dead bodies from the helicopters, so it’s quite overwhelming,” Kyi Minn, an adviser to World Vision’s office in Rangoon.
“The impact of the disaster could be worse than the (2004 Asian) tsunami because it is compounded by the limited availability of resources on top of the transport constraints,” he said.
Video footage of the disaster zone showed flattened villages, smashed bridges, and survivors forced to live out in the open and trying to dry their sodden clothes and blankets.
Aid groups were rushing to bring food, water, clothing and shelter into the country, whose military rulers have long turned their back on the outside world and ignored calls to move towards democracy.
Relief officials said fears were mounting over the spread of disease, and that they faced major logistical problems in getting aid to badly hit regions that are both remote and densely populated.
“Getting it out to the affected populations will beamajor challenge, given that there is widespread flooding,” said Richard Horsey,aspokesman for the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in Bangkok.
“The urgent need is for shelter and for water. Without clean drinking water, the risk of disease spreading is the most serious concern.”
The UN’s World Food Program said it had begun distributing 800 tonnes of food to hardest-hit areas, but that many coastal regions remained cut off due to flooding and road damage.
Burma faced criticism over its apparent lack of preparation for the disaster, with US First Lady Laura Bush saying the government had not done enough to warn citizens the storm was approaching.
Indian meteorologists said they warned Burma 48 hours before the storm hit, while the UN’s disaster reduction agency said it was clear many people had no time to evacuate.
မုန်တိုင်းသတင်းနောက်ဆက်တွဲ6May
May 5, 2008 freebird	Leaveacomment
Myanmar Cyclone Death Total In One Town, Bogalay, Is 10,000 – State TV
Among those arriving in Bangkok Monday, on one of the first flights out of Rangoon, was Sweden’s former Minister of Democracy and Integration, Jens Orback, who tells VOA the main city is paralyzed.
“The electricity went out,” he said. “The telephones didn’t work. The TV, the radio, the cellular telephones, everything was wiped out. When talking to people, they were very upset in the beginning that nobody from the military, from the police, from the fire forces were out on the street. Only private people were there with machetes, actually trying to get rid of the trees.
“I talked to some civilians on the market and they werealittle bit surprised that nobody was doing anything,” he added. “Because if there’s anything that are very present in Burma otherwise, it’s police and military but there were none of them out in the hours after the disaster.”
The few reports coming in from the countryside suggest the devastation is widespread. Burmese state radio said nearly 3,000 people were missing in one town, Bogalay, in the country’s Irawaddy River Delta – an area believed to be especially hard-hit.
Inarare gesture, atameeting with foreign diplomats and representatives of U.N. agencies and international aid organizations, the military government said it welcomed humanitarian assistance .
Burmese officials called for aid including roofing materials, medicine, tents, blankets, and water purifying tablets.
The generals say they plan to go ahead withaconstitutional referendum next Saturday. They say the vote is another step in the process of returning Burma to democracy following more than four decades of military rule. Members of the international community, including the United States, have called the referendumasham because the drafting of the document excluded the country’s main opposition groups.
“Now, people may see nothing to lose and people may even get angry that the government is not really caring about them, but just caring about the referendum,” he said. “The urgent need for the people is not the referendum, but relief.”
ဘိုကလေးမြို့ တစ်ခုတည်းမှာပင် သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၁၀၀၀(တစ်သောင်း) ရှိနေကြောင်း အစိုးရမှ အတည်ပြုပြောကြားသည်။
အစိုးရမှ နိုင်ငံတကာသို့အကူအညီစတင်တောင်းခံနေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်မှာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော်လည်း -အကူအညီအမှန်လိုအပ်သူ ပြည်သူများ အကူအညီများ ထိရောက်စွာရောင်ရှိနိုသော နည်းလမ်းများမှာ ယခု အချိန်အထိ သဲသဲကွဲကွဲ မသိရသေးကြောင်း UN နှင့် အခြား အဖွဲ့ အစည်းများက ပြောဆိုနေကြသည်။ ယခင်ကာလများတွင် ပြည်ပအကူအညီများမှာ အကူအညီအမှန်လိုအပ်သူ ပြည်သူများဆီသို့ 
40 % ခန့် သာရောက်ရှိပြီး အခြား 60% မှာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ၏ လက်ထဲတွင် ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့သည်။ ထို့ အပြင် အကူအညီပေးသော လူမူရေးအဖွဲ့ အစည်းများသည် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရခဲ့ဘဲ၊ ကန့် သတ်ချုပ်ချယ်မှုများနှင့် အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသော သာဓကများစွာ အတိတ်၌ရှိခဲ့ဖူး၍ ယခုအကြိမ်သည် စစ်အစိုးရအတွက် ပြည်သူအတွက် အကျိူးရှိစေမယ့် အပြောင်းအလဲရှိလာမည်လားဆိုသော စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
သို့ မဟုတ် ယခင်ကလိုပဲ အာဏာပိုင်များ၏လက်ထဲသို့ သာ ပြည်ပမှ အကူအညီများ ရောက်ရှိသွားမည်ဆိုလျှင် မြန်မာပြည်ရှိ ပြည်သူများအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
မုန်တိုင်းသတင်းနောက်ဆက်တွဲ5May
မေလ-၁၀ ရက် နေ့ဆန္ဒမဲပေးပွဲကို မရွှေ့ မပြောင်းဘဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ သတင်းဌာနမှ ကြေငြာကြောင်းသိရှိရသည်။
မုန်တိုင်း ကြောင့် လူပေါင်း 350 ကျော် သေဆုံးသည်ဟု အစိုးရသတင်းဌာနမှ ပြောကြားကြောင်းသိရှိရသည်။
ထို့ အပြင် အသေအပျောက် စာရင်း ၁၀၀၀၀ (တစ်သောင်း) အထိရှိနိုင်ကြောင်း မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းသည် နိုင်ငံတကာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသူများသည် အစားအသောက်နှင့် ရေပြဿနာ အကြီးအကျယ် ကြုံနေရပြီး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အကူအညီ ပေးရေးလုပ်ငန်းများ ယခုတိုင် မစတင်နိုင်သေးသဖြင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းက စိုးရိမ်နေကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ကုန်ဈေးနှုန်း (၅) ဆမှ (၁၀) ဆအထိ ထိုးတက်သွားပြီး အစားအသောက် ရှားပါးမှုကြောင့် သာကေတ၊ ဒလ၊ ညောင်ပင်လေးဈေးဘက်တွင် လုယက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။်
“ရန်ကုန်မှာ အစားအသောက်ဈေးတွေ တက်ကုန်ပြီး၊ ကားတွေမထွက်နိုင်ဘူး၊ ဒီနေ့ မနက်မှ ပြန်ထွက်တယ်၊ ဓာတ်ဆီဈေးက ၅ ထောင်(၅၀၀၀) ကနေ တသောင်းခွဲ(၁၅၀၀)ကို ခုန်တက်သွားတယ်၊ ကားက ဟိုနားဒီနား ၃၀၀။ ၅ မှတ်တိုင်လောက်ဆို ၅၀၀။ အဲဒီထက်များရင် ၁၀၀၀၊ စီအန်ဂျီတွေ မပေးနိုင်ဘူး၊ ဘဲဥ တလုံးဆို ၃၀၀၊ ဆန်က ရောင်းမယ့်လူ မရှိဘူး၊ အငတ်ဘေးလည်း ဖြစ်လာတော့၊ တမြို့လုံး အတိုင်းအတာနှင့် အတော်ကြီးတယ်၊ အခုချိန်ထိ ဒဂုံမြို့သစ်။ ဒဂုံ တက္ကသိုလ်တို့မှာ ရေမြုပ်နေတုန်းပဲ” ဟုပြောသည်။
ကိုးရီးယားရောက် မြန်မာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း လေဘေး ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးရေးအတွက် အလှူငွေများ စုဆောင်းရန် ယနေ့မှ စ၍ စီစဉ်လျက် ရှိသည်။
ကိုးရီးယားတွင် ဖွဲ့ထားသော မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားရေး မြင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင် ဇေ မင်းအောင်က “ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ မုန်တိုင်း ဒဏ်ခံရသူများကို ကူညီနိုင်ဖို့ ပထမအဆင့် အနေနဲ့ ရန်ပုံငွေရဖို့။ ကောက်ခံတဲ့အခါမှာ ကိုရီးယားမှာ ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ကောက်ခံဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်၊ ရန်ပုံငွေ ရရှိပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဒေသတွေဆီ ရောက်အောင် ပို့သွားမှာပါ” ဟု ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းတွင်း တယ်လီဖုံး ပြတ်တောက်မှုဖြစ်ရာ ဒေသတွင်းမှ ဖြတ်သန်းလာသူများ၏ ပြန်ပြောစကားကိုသာ စီစစ်နေရသည်။
ရန်ကုန်တဘက်ကမ်း ဒလမြို့တွင်လည်း မြို့လုံးကျွတ်နီးပါး အိုးအိမ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ရှိသည်။ ထို့အပြင် သောက်ရေ ပြတ်တောက်မှုကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံနေရသည်။
တခုတည်းသော ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်နှင့် ဒလမြို့သို့ ကူးခတ်နေသည့် သမ္ဗာန်များ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။
အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များတွင် အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၃၅၁ ယောက် သေဆုံးရာတွင် ဟိုင်းကြီးကျွန်းသည် ၁၀၉ ယောက် သေဆုံးပြီး အဆိုးဝါးဆုံး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အနည်ဆုံး အိမ်ခြေ ၂၀၀၀၀ ပျက်စီးပြီး လူ ၉၀၀၀၀ ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ပါရှိသည်။
အစဉ်အမြဲ သတင်းအမှောင်ချ လျှို့ဝှက်လေ့ရှိသည့် မြန်မာ စစ်အစိုးရကြောင့် စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများက အမှန်တကယ် သေဆုံးသူ အရေအတွက်မှာ အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက်ထက် များနိုင်သည်ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်ပင်လယ်ဝတွင် ရပ်နားထားသော စစ်သင်္ဘောတစီး မြုပ်သွားခဲ့ပြီး ကြည့်မြင်တိုင် ဆိပ်ကမ်းတွင် ငါးတင် သင်္ဘောတစီး နှစ်မြုပ်သွားသည်။
ရန်ကုန်တွင်တော့ ရေပြတ်တောက်မှုကို ကြုံတွေ့နေရသဖြင့် အင်းယားကန်၊ ကန်တော်ကြီးများတွင် ဆယ်ဘီးကားများ၊ ထရပ်ကားများဖြင့် လာရောက် ရေသယ်၊ ရေချိုး ပြုလုပ်နေကြသည်။
အနော်ရထာ လမ်းမကြီးတွင် စည်ပင်သာယာမှ ရေကားများက ရေဝေမှု ပြုလုပ်နေရာ ရေပုံး၊ ရေခွက် အရွယ်စုံဖြင့် ရေလာယူသူ လူတန်းရှည်ကြီးများ ဖြစ်ပေါ်လျှက် ရှိသည်။
တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်နှင့် ရန်ကင်းမြို့များတွင် ဂျိုးဖြူပိုက်ကို ဖောက်၍ သောက်သုံးရေ ရရှိရန် ကြိုးစားမှုများ ရှိခဲ့သည်။ မီးသတ် ပိုက်ခေါင်းများကို ဖွင့်၍ ရေဝေသုံးစွဲမှုများ သာကေတမြို့နယ်တွင် တွေ့ရသည်။
လုယက်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည် ဆိုသော စိုးရိမ်ချက်များကား ဒေသခံများတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက် ရှိသည်။
အစိုးရ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ရာ လောင်စာဆီ ပြတ်တောက်မှု အနည်းငယ် လျော့ပါးသွားသည်။ သို့သော် နှစ်မိုင်ခန့်ပင် ရှည်လျားသော ဆီထည့်ရန် စောင့်နေသည့် ယာဉ်တန်းကြီးများကို ဆီဆိုင်တိုင်းလိုလိုတွင် တွေ့မြင်ရသည်။ မှောင်ခို ဈေးကွက်တွင်တော့ ဈေးတက်ဆဲ ဖြစ်ရာ ဓာတ်ဆီတဂါလံ ၁၂၀၀၀ ကျပ်နှင့် ဒီဇယ်ဆီတဂါလံ ၁၅၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။
စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များက ည ၁၀ နာရီအထိ ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်သည်ဟု ကြေညာထားသည်။
ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း ကဲ့သို့သော လမ်းမကြီးအချို့ ပြန်ပွင့်လာသော်လည်း ယာဉ်လမ်းပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ မြို့ထဲတွင်တော့ မီးစက်သံများတညံညံ ပေါ်ထွက်နေသည်။
အိမ်မိုးသွပ်ဈေးများ ၅ ဆ မြင့်တက်သွားပြီး တပေလျှင် ကျပ် ၃၀၀၀ သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ မုန်တိုင်း မတိုက်မီက တပေလျှင် ကျပ် ၆၀၀ သာ ရှိသည်။ သွပ်ရိုက် သံကတော့ တပိသာလျှင် ၃ သောင်းကျပ် ဖြစ်သည်။
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဒီရေ ၀င်ရောက်ပြီး ရေလျှံနေသည်။ အိမ်တွေယိုင်၊ သစ်ပင်ပြိုလဲမှု အဖြစ်များသည်။
ရန်ကုန်လေဆိပ် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် ခရီးသည်များ တင်ဆောင်ထားသော ပြည်ပ လေယာဉ်များ ပြန်လည် ပြေးဆွဲနေပြီ ဖြစ်သည်။
Yangon devastated byamajor cyclone
May 3, 2008 freebird	Leaveacomment
Photo can be seen : http://picasaweb.google.com/lunswe70/NARGIS
နာဂစ်အမည်ရှိ မုန်တိုင်းသည် သောကြာနေ့ ညလယ်အချိန်တွင် မြန်မာပြည် ကမ်းရိုးတမ်းရှိ လပွတ္တာမြို့သို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး နံနက် ၅ နာရီခွဲတွင် အပြင်းထန်ဆုံး အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ တိုက်ခတ်ခဲ့သည်။
“မုန်တိုင်းက မနေ့ည ၁၁ နာရီက စတိုက်တယ်၊ ၁ နာရီက စပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တာ အပြင်းဆုံးအချိန်ကတော့ မနက် ၅ နာရီ၊ ၆ နာရီ ထင်တာပဲ၊ အိမ်တအိမ်လုံးရေတွေထဲ မှာ၊ မနက် ၇ နာရီ လောက်မှာ သွပ်မိုး လန်သွားတာ၊ တညလုံးလည်း မအိပ်ရဘူး၊ စလောင်းတွေ အားလုံးလည်း လွင့်၊ ကားတွေက လမ်းမကြီးတွေမှာ တောင် ရှောင်သွားနေရတယ်၊ သစ်ပင်တွေ လည်းကျိုး၊ သစ်ပင်တွေကုန်ပြီ၊ လူအသေ အပျောက်ကတော့ အတိ အကျ မသိနိုင်သေးဘူး၊ မနက် ၁၁ နာရီခွဲလောက်မှာ တော့လေရပ်သွားတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်တွင် နေထိုင်သည့် သတင်းထောက် တဦးက ပြောသည်။
ကျောက်တန်းမြို့ဘက်တွင် အပျက်အစီး ပိုမို များပြားသည်ဟု ရန်ကုန်သတင်းများ အရ သိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ “အမိုးပြားတွေ ကောင်းကင်မှာ ပျံဝဲနေခဲ့တာ” ဟုပြောပြီး “အခုတော့ ကောင်းကင်ကြီးက နီတောက်နေတာ” ဟ်ုပြောသည်။ည ၁၂ နာရီထိုးကတည်းက ရန်ကုန်မြို့သို့ နာဂစ်ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်း ကျရောက်နေရာ ယခုအချိန်အထိ အားကောင်းဆဲ ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်အထိ အသေအပျောက် စာရင်းအတိအကျကို မသိရှိရသေးသော်လည်း အေပီ သတင်း တပုဒ်၏ အဆိုအရ ရန်ကုန်မြစ်ကို ဖြတ်ကူးသော အမျိုးသမီး ၃ ဦး လေပြင်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လှေမှောက်သေဆုံးသည် ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တဝန်း သစ်ပင်ကြီးများ ပြိုလဲမှုကြောင့် လမ်းများ ပိတ်ကုန်ပြီး လမ်းများပေါ်တွင်ရပ် ထားသော ကားများစွာမှာလည်း သစ်ပင်များ ပိလျှက်ရှိကြောင်း၊ လျှပ်စစ်မီးနှင့် တယ်လီဖုန်း လိုင်းများ ပြတ်တောက်ကုန် ကြောင်း၊ မိုဘိုင်း လက်ကိုင် ဖုန်းများလည်း ဆက်သွယ်၍မရတော့ကြောင်း၊ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် များနှင့် ဂြိုဟ်တုစလောင်း များ အားလုံးနီးပါးမှာ ပြိုကျ ပျက်စီးကုန်ကြောင်း ဆိုသည်။
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ရန်ကုန် စီးတီး အက်ဖ်အမ် ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်မှုများ ရပ်ဆိုင်းကုန် သည်ဟု ဆိုသည်။ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကို ယခုအခါ ပိတ်ထားရကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ရန်ကုန် ကမာရွတ်မြို့နယ် စံရိပ်ငြိမ် ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူ တဦးကလည်း ၎င်းတို့နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက် တခုလုံး တွင်လည်း မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက် ပျက်စီးမှုများရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“မုန်တိုင်းက တော်တော်ဆိုးတယ်၊ တလမ်းမှ မလွတ်ဘူး၊ မှန်တွေကွဲတယ်၊ ခေါင်းမိုးပေါ်တင်ထားတဲ့ စလောင်းတွေ လန်ကုန်ပြီ အောက်ကို ပြုတ်ကျကုန်တယ်၊ ကားတွေပေါ်သစ်ပင်ပိတယ်၊ ကျနော့်ကားလည်းပိတယ်၊ သွပ်ပြားတွေ အချပ် လိုက် လမ်းတွေပေါ်ပြေးနေတယ်”ဟု စံရိပ်ငြိမ်တွင် နေသူက ပြောသည်။
မျက်မြင်တဦးကလည်း ကမာရွတ်၊ လှိုင်၊ မြေနီကုန်း ဝန်းကျင်၊ ရွှေုဂုန်တိုင် ဝန်းကျင်နှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ဝန်းကျင်တို့ တွင် သစ်ပင်များလဲကျ၍ လမ်းများပိတ်နေကြောင်း ပြောပြသည်။
ထူးဆန်းလှသော ဆူညံမှုကြီး ထွက်ပေါ်နေပြီး မြို့အနှံ့အပြား သွပ်မိုးများ လွင့်ပျံထွက်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းသည် ပျက်စီးမှု ပိုမိုများနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး လူပေါင်းများစွာ အသေအပျောက်များပင် ရှိနေသည်
“အိမ်အပြင်တောင်ထွက်လို့ မရဘူး၊ လမ်းမှာ သစ်ပင်ကြီးတွေပိတ်နေတယ်၊ အိမ်အမိုးတွေလန်တယ်၊ တချို့ အိမ်ပြိုတယ်”
ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းကစ၍ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း အမှတ် (၁)၊ အခြေခံပညာ မူလတန်း ကျောင်း အမှတ် (၁၂) နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးပြတိုက်တို့တွင် လေဘေးဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဖွင့်လှစ်ထားသည် ဟုလည်း အဆိုပါဒေသခံက ဆိုသည်။
ယင်းမုန်တိုင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်း သံတွဲ၊ တောင်ကုတ်၊ ဂွ တို့ကိုလည်း ညဦးပိုင်းတွင် ဖြတ်သွားပြီး အထိအခိုက် ရှိကြောင်း ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
နာဂစ် မုန်တိုင်းသည် ဧရာဝတီ တိုင်းရှိ ပုသိမ်၊ မြောင်းမြ၊ လပွတ္တာ၊ မော်လမြိုင်ကျွန်း၊ ကျုံမငေး၊ ဘိုကလေး၊ ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင်၊ သာယာဝတီ၊ ဂွ မြို့တို့ကိုလည်း ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်ရာ အပျက်အစီး များကြောင်း သိရှိရသည်။ အသေးစိတ် ကိုမူ ဆက်လက် စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။